Guuldarrada weyn ee Arsenal gaartay – LaacibOnline
Guuldarrada weyn ee Arsenal gaartay
22 Maarso 2014
Samuel Eto’o oo gool u dhaliyay Chelsea
Waxaa dhacay ciyaaro natiijadooda lala yaabay. Waxaa guulaystay kooxaha Chelsea, Liverpool, Manchester City iyo Manchester United. Waxaana guusha ugu weyn ku raaxeysatay Chelsea.
Waa la kala badin jiray laakiin goolasha galabta la kala dhaliyay inta badan lama kala dhaliyo. Waana kuwan natiijooyinkii oo dhan:
Newcastle 0_0 Crystal Palace
West Ham 0_2 Manchester United.
Waxaa khasaaraha ugu weyn la kulantay kooxda Arsenal oo rajadeedu ahayd inay soo gaarto Chelsea oo tartanka hoggaaminaysa hase ahaatee waxaa dusha loo saaray lix gool oo afar ka mid ah laga dhaliyay qaybtii koowaad ee ciyaarta.
Waxaa kaloo laga saaray hal ciyaartoy kaddib markii ay kooxdu kubbadda gacanta ku celisay hase ahaatee waxaa calaamadda guduudan loo taagay laacibka Gibbs halkii looga taagi lahaa Champerlain oo kubbadda gacanta uga leexiyay goosha.
Maanta waxay ku beegnayd ciyaartii 1000aad ee tababare Arsene Wenger uu maamulo kooxda Arsenal hase yeeshee niyad-jab ayay garoonka kala tageen isaga iyo taageerayaasha kooxduba. Arsenal waxay hadda hoos ugu soo dhacday kaalinta 4aad ee kala horreynta kooxaha.
Waxaa kaloo khasaaray saddexda kooxood ee ugu hooseeya tartanka horyaalka oo kala ah:
Sunderland Cardiff Fulham
kuwaas oo laga wada badiyay, ayna ku sii korortay cabsida ay ka qabaan inay sanadkan hoos ugu dhacaan kooxaha heerka labaad.
← Somalia: Opposition Presidential Contenders Accuse Mogadishu Mayor of ‘War-Inciting’ Threats
Isniin, Nov 30, 2020-Mid ka mid ahaa raggii uu xirnaa weerarkii Jaamacadda Gaariga oo xabsiga isku dhax dilay →
Magaalada Rio ee Brazil
November 27, 2020 Abdirisaaq 0
Brazil 2014 – BBC News Somali
England oo isbadal ku samaynaysa ciyaaryahanada u safanaya
June 21, 2020 Abdirisaaq 0